जावलाखेलका प्रशिक्षक किशोर केसीले ठीकै भनेका हुन्, ललितपुरको यो क्लबका लागि एनआरटी अधिकांश समय कठिन प्रतिद्वन्द्वी हुने गर्छ । लिगका जावलाखेलले एनआरटीलाई नहराएको पनि १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सोमबार पनि त्यस्तै नियति रह्यो ।
‘म मान्छे त उही हुँ, तर बानीबेहोरा सुध्रिएको छ ।’ फुटबलर विमल घर्तीमगरको मीठो भनाइ हो यो । फेरि यो यस्तो भनाइ हो, जसले नेपाली फुटबललाई खुसी दिनेछ । मछिन्द्र क्लबका लागि त त्यसै खुसी हुने कारण नै हो । नेपाली फुटबलले धेरै आस गरेका खेलाडीमा पर्छन् उनी ।
केही वर्षअघि सहिद स्मारक लिगमै फ्रेन्ड्सले आर्मीलाई हराउँदा प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रले खुबै स्वादिलो कथा सुनाएका थिए । केही खराब नतिजापछि फ्रेन्ड्सले यो जित निकालेको थियो ।
पुलिसको त्यो अविजित ४९ खेल
यो त्यतिबेलाको कथा हो, जतिबेला पुलिस नेपाली फुटबलमा साँच्चै ‘अजय’ थियो । फुटबलमा कथा हुन्छन् र ? हुन्छ । अहिलेका पुलिस फुटबल समर्थकलाई यसबारे सुनाउने हो भने त्यो उनीहरूले यसलाई कथा नै मान्ने छन् । र, यो नेपाली लिग फुटबलको त्यस्तो कीर्तिमान हो, जुन तोडिन गाह्रो छ । सायद तोडिने छैन पनि । वर्ष ०६३ देखि ०६८ बीच लिगका तीन संस्करणमा पुलिस लगातार ४९ खेल अपराजित थियो ।
पुलिसलाई इतिहासले बिझाउँदै
घरेलु फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको टिम ‘फलन जायन्ट्स’ जस्तै भएको छ । ठ्याक्कैभन्दा पुलिसलाई इतिहासका आफ्नै उपलब्धिले बिझाउन थालेको छ । केही वर्षअघिसम्म पनि पुलिस आफूले खेलेका प्रत्येक प्रतियोगितामा उपाधिका लागि चुनौती पेस गर्ने गर्थ्यो । तर अब त्यस्तो रहेन । कम्तीमा लिग फुटबलमा त पुलिसको यस्तो प्रदर्शन रहँदै रहेन । सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन ०७८ को आठौं चरण आइपुग्दा पुलिसले ७ अंकमात्र बटुलेको छ ।
रहेनन् पहिलो ओलम्पिक सेफ द मिसन
नेपालले सन् १९६४ को टोकियो ओलम्पिकमा पहिलोपल्ट सहभागिता जनाएको थियो । त्यस अर्थमा त्यस संस्करणको ओलम्पिकको नेपाली खेलकुदमा ठूलो महत्त्व छ । कुल ६ खेलाडीसहित सानो नेपाली टोली थियो, त्यो । त्यसकै एक सदस्य द्वारिकाराम भगत माथेमाको गत साता निधन भएको छ । त्यस ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा उनले नेपालको झन्डा बोक्ने अवसर पाएका थिए, किनभने उनी त्यस ओलम्पिकमा नेपालका सेफ द मिसन थिए ।
अन्तत: थ्रीस्टार लयमा
थ्रीस्टार क्लब त्यहीं पुगेको छ, जहाँ हुनुपर्ने थियो । के थ्रीस्टारले लय समातेको हो त ? अन्तत: सायद यस्तै भएको छ । थ्रीस्टार नेपाली घरेलु फुटबलको त्यस्तो टिम हो, जसले उपाधिको लागि चुनौती दिने गर्छ । सकेन भने पनि शीर्ष चारका लागि । अन्यथा यो क्लबलाई सुहाउँदैन पनि ।
ओलम्पिक्स, युरो र कोपाको वर्ष
सन् २०२१ तीन ठूला खेल महोत्सवको लागि सम्झिने छ र ती हुन्, गृष्मकालीन टोकियो ओलम्पिक्स, युरो र कोपा । त्यसमध्ये युरो र कोपा विश्व फुटबलका दुई ठूला प्रतियोगिता भए, प्रभावका आधारमा विश्वकप पछि पछाडि आउने ।